သတင်း Archives - Khitalin Media
ဇွဲကပင်တောင်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ ရုပ်အလောင်းကိုရှာဖွေသယ်ထုတ်နေတဲ့ Live ရုပ်သံ
July 10, 2020 Khitalin Media 0
ဇွဲကပင်တောင်မှာ ဒီကနေ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကို သေဆုံးလျှက် ပြန်တွေ့ရပြီလို့ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးဝန်ကြီးစောဘိုဘိုဝေမောင်က သူရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်က အသိပေးလိုက်ပါတယ်။သေဆုံးလျှက်ပြန်တွေ့တာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးရုပ်အလောင်းကိုသယ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ် လို့သိရပါတယ်။အလောင်းကို တောင်ခြေရောက်ခါနီးမှာ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ဘားအံ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တက်သွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် မီးသတ်နဲ့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ဇွဲကပင်တောင်မှာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက် […]
နှုတျဆကျစာရေးပွီး ဇှဲကပငျတောငျ ပျေါတကျသှားတဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသား ကို ရှာတှပွေီ့
ယခုလက်ရှိမှာတော့တွေ့ရှိထားပါပြီး… Dead Body အဖြစ် အတည်ပြုထားပါတယ်…. သေဆုံးသွားပြီလို့ သိရပါတယ် အဆိုပါ အမျိုးသားက အသက် ၂၁နှစ်အရွယ် ဒုတိယနှစ် ဘူမိဗေဒ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ် တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေလည်း သိရှိပြီး ရောက်လာကြပြီ ဖြစ်သလို အားလုံးက ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ် ဇွဲကပင် ‌တောင်ပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ […]
ဇွဲကပင်တောင်တွင် လူငယ်တစ်ဦး ထပ်မံပျောက်နေပြန်
ဇွဲကပင် ဒုတိယအကြိမ် လာပြန်ပါပြီး ဒီတခါတော့ ယောင်္ကျားလေးပါ … စာလဲရေးထားခဲ့ပါတယ် … ဆိုင်ကယ် လွယ်အိတ် သော့တွေ ဖုန်း PW တွေ ချန်ထားခဲ့ပါတယ် … ကျားကလေးရွာကလို့ သိရပြီး ဇွဲကပင်တောင်ကို ၁ဝ ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီလောက်ကတက်သွားပြီး ခုချိန်ထိပြန်မဆင်း လာတော့ပဲ […]
ရကွေီးရလြှေံဖွဈပျေါမှုကွောငျ့ ရကောတာ ဖောကျခစြဉျ ခြောငျးကမျးနံဘေးက နအေိမျတဈခြို့ရတေိုကျစားပွီးမြောပါသှားပုံ.. (ရုပျသံ)
ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တွေပါ မျက်စိရှေ့မှာတင် ဖြစ်ပျက်မှု့တွေပါ… ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကြည့်ရှု့ရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်ဇီပြည်နယ်အရှေ့တောင်ဘက် ( ထိုင်ဝမ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ) မှာ မိုးများပြီး ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် ရေကာတာ ဖောက်ချစဉ် ချောင်းကမ်းနံဘေးက နေအိမ်တစ်ချို့ရေတိုက်စားပြီးမျောပါသွားပုံ.. (ရုပ်သံ) VDO […]
ဖခငျဖွဈသူက မိခငျကိုပုတငျပေါကျကနပေဈခခြဲ့ရာမှ မိခငျ၏အသကျကိုကယျဆယျပေးနိုငျခဲ့တဲ့ သမီးငယျရဲ့လုပျရပျ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် 48 နှစ်အရွယ် Taxi မောင်းတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ၏ အသက် 29 နှစ်အရွယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူဇနီးသည်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး ရန်ဖြစ်စကားများကြရာမှ 9လွှာမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ ပုတင်းပေါက်ကနေ ဇနီးသည်ကို ပစ်ချခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ အဆိုပါအမျိုးသားဟာ အိမ်ပိုင်ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံစုဆောင်းနေပေမဲ့ အဆိုပါပိုက်ဆံတွေကို ဇနီးသည်က ဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့ ဆွေးမျိုးတွေဆီပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ဖြစ်စကားများကြရင်း […]
၁၁ နှဈနဲ့ ရညျးစားထားပီး အတူဆကျဆံနတောကို မကျြမွငျတှလေို့ကျရတဲ့ အမရေဲ့အဖွဈ
July 9, 2020 Khitalin Media 0
(၁၁)နှစ်သမီးကိုချစ်ကြိုက်ခိုးယူပေါင်းသင်းမိလို့အမှုဖွင့်ခံရသူ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၈.၇.၂၀၂၀ရက်နံနက်၀၀နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင်သာယာ(အရှေ့)ရဲစခန်းတွင်ဒုရဲမှုးစန်းယုစခန်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒေါ်…….(၂၈)နှစ်၊ကုန်စိမ်းရောင်း၊……လမ်း၊လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်နေသူက၎င်းသည်၇-၇-၂၀၂၀ရက်နေ့လည်၃နာရီအချိန်ခန့်ကနေအိမ်တွင်ကုန်စိမ်းရောင်းနေစဉ်တစ်လမ်းထဲနေအိမ်နီးချင်းကောင်လေးဖြစ်သော မောင်အရိုးဖြူ(ခ)ခိုင်ဝင်းကျော်ရောက်ရှိလာပြီး အန်တီခဏ လောက်လိုက်ခဲ့ပါဦး၊၊ အန်တီသမီးမ…..(၁၁နှစ်၁လ)နှင့်စိုးလင်းအောင်(ခ)လက်သဲ(၁၇)နှစ်၊ကယ်ရီမောင်း၊…..ရပ်၊လှိုင်သာယာနေသူတို့နှစ်ဦးအားလှိုင်သာယာ ၊စက်မှုဇုံ(၁)၊ စပယ်(၁)လမ်းအနီးဆောက်လက်စအုတ်တံတိုင်းနောက်သို့ဝင်သွားကြောင်းလာရောက်ပြောသဖြင့်တရားလိုလည်းခိုင်ဝင်းကျော်နှင့်အတူလိုက်သွားသောအခါအုတ်တံတိုင်းဘေးတွင်သမီးဖြစ်သူမ…….အားပက်လက်အနေထားဖြင့်အောက်တွင်တွေ့ရှိ ရပြီး စိုးလင်းအောင်(ခ)လက်သဲသည် အပေါ်မှတက်ခွကာသားမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေသည်ကို တရားလိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် မ…..(ခ)မ….ကိုဆွဲခေါ်ပြီးနေအိမ်သို့ပြန်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းသောအခါစိုးလင်းအောင်(ခ)လက်သဲနှင့်လွန်ခဲ့သော(၂၀၂၀)ခုနှစ်(၄)လပိုင်းနေ့ရက်မမှတ်မိကထဲကချစ်ကြိုက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သော(၁)လခန့်က(၅၅၅)သဲကွင်းတွင်နေထိုင်သောဒေါ်….၏နေအိမ်တွင်သားမယားအဖြစ်တစ်ကြိမ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်(၁.၇.၂၀၂၀)ရက်ည၁၀နာရီအချိန်ခန့်တရားလိုတို့အိပ်ပျော်နေသည့်အချိန်တွင်တရားလို၏နေအိမ်အိပ်ခန်းထဲ၌ပင်သားမယားအဖြစ်တစ်ကြိမ်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း၊ယခုတစ်ကြိမ်နှင့် ဆိုလျှင်(၃) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြချက်အရ တရားလိုမှသိရှိခဲ့ရပြီးတရားလို….၏မိဘအုပ်ထိမ်းမှုအောက်မလွတ်ကင်းသေးကာအသက်မပြည့်သေးသူသမီးမ……….အားဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခေါ်ဆောင်၍သားမယားအဖြစ်(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့သော စိုးလင်းအောင်(ခ)လက်သဲ(၁၇)နှစ်အားတရားဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာလှိုင်သာယာ(အရှေ့ရဲစခန်း(ပ)၃၅၉၂/၂၀၂၀ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ၃၆၃/၃၇၆အရအမှုရေးဖွင့်ကာဒုရဲမှုးစန်းယုကပြစ်မှုကျူးလွန်သူစိုးလင်းအောင်ကိုအမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရသည်။ တင်နိုင်ထွန်း(လှိုင်သာယာ) SHသတင်းဌာန ရှုထောင့်မှုခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ် အမှန်တရားဂျာနယ် Unicode […]
#မိသားစုဝင်များအားဝိဉာဉ်မှအိပ်မက်ပေးခဲ့အလောင်း ပင်လယ်ပြင်တွင်ငါးဖမ်းထွက်ရင်းပျောက်ဆုံးနေသော ရေလုပ်သားမှ သူ့အားလိုက်မရှာကြရန်နှင့် အချိန်တန်ရင်သူ၏အလောင်းအား အလ်ိုလိုမြင်တွေ့ရမည်ဟု မိသားစုဝင်များကိုအိပ်မက်ပေးပြီးနောက် အလောင်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ဇူလိုင် ၉ ရက် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ” ပ ရကျွပ်ခီရိခမ်း ” ခရိုင် ” ဆမ်လွိုက်ယော့ဒ် မြို့နယ်တွင် ပယ်လယ်ထဲသို့စက်လှေဖြင့်တစ်ဦးတည်းငါးဖမ်းထွက်သွာရင်း […]
ခဈြဇနီးလေးရဲ့အသုဘကို မင်ျဂလာပှဲပုံစံအဖွဈပွောငျးလဲပွီး ဇနီးလေးရဲ့နောကျဆုံးဆန်ဒကိုဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တဲ့ အမြိုးသား
July 8, 2020 Khitalin Media 0
မင်္ဂလာပွဲဆိုတာကတော့ ချစ်ရသူနှစ်ဦးပေါင်းဖက်ပြီး ဘဝတစ်လျှောက်အတူလက်တွဲသွားဖို့ ရည်ရွယ်သည့်အပြင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိသားစုများနှင့် စုံစုံညီညီရယ်မောပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ဒီတစ်ခေါက် တရုတ်နိုင်ငံ Dalian မြို့မှာကျင်းပတဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့ ပွဲလာပရိသတ်များကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစေပြီးငိုကြွေးစေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အသက် 35 နှစ်အရွယ် Xu အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာ ရင်သားကင်ဆာ 5နှစ်ခန့်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ […]
(6) နှစ်လောက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲမှာ ဝမ်းနည်းပက်လက် ငိုကြွေးခဲ့တဲ့ ကောင်လေး(ရုပ်သံ)
July 7, 2020 Khitalin Media 0
အချိန်အတော်ကြာကိုယ်နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးက အခြားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ် ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ အဆိုပါဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ Aswar Anas အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသား နဲ့ Asni အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း 6နှစ်လုံးလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း တိကျလွန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်အချို့တွေကြောင့် မိန်းကလေးဟာ အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် […]
အိမျမှာ မီးပလပျပေါကျရှိလငျြ ကလေးငယျရှိတဲ့သူတိုငျး အထူးသတိထားသငျ့ပါတယျ
July 6, 2020 Khitalin Media 0
ကလေးငယ်တစ်ဦး မီးပလပ်ပေါက်ထဲလက်ညှိုးထိုးထည့် ကစားရာမှဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှုဖြစ် #အိမ်မှာကလေးငယ်ရှိတဲ့သူတိုင်း #အထူးသတိထားသင့်ပါတယ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ရတ်စီမာခရိုင် ထုန့်မြို့နယ် ပရစ်ကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ကွက် ၇ အိမ်အမှတ် ၁၀၅ မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုမှ ၂ နှစ်သားကလေးငယ် နတ်ထကွန်း ဟာ အိမ်မှာကြွေပြားခင်းနေစဉ် အသုံးပြုတဲ့မီးပလပ်ပေါက်ထဲလက်ညှိုးထိုးဆော့ကစားရာ ဓါတ်လိုက်မှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ […]
သင့်ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းက သင့် ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ
ဇှဲကပငျတောငျကွီးကိုတိုငျတညျလို့ ရုပျပုံထငျရှာ;ဇှဲကပငျမွမှေ သနားစရာ ကရငျမောငျနှမ(၂)ဦး၏ သမိုငျးကွောငျး…